XOG: Goormaa La Samaynayaa Isku Aadka Afar Dhamaadka UEFA Nations League? Xulalka Soo Baxay Iyo Waqtiga Kulamadan La Ciyaari Doono. – Cadalool.com
XOG: Goormaa La Samaynayaa Isku Aadka Afar Dhamaadka UEFA Nations League? Xulalka Soo Baxay Iyo Waqtiga Kulamadan La Ciyaari Doono.
Waxaa caawa la soo gaba gabayn doonaa xulalka u soo baxaya afar dhamaadka tartanka xulalka qaramada qaarada Yurub ee UEFA Nations League iyada oo haddaba la ogyahay saddex ka mid ah afarta xul qaran ee ku sii tartami doona koobka UEFA Nations League.
Isku aadka afar dhamaadka UEFA Nations League ayaa la samayn doonaa waxaana sidoo kale la shaaciyay taariikha la ciyaari doono labada kulan ee afar dhamaadka UEFA Nations League halka sidoo kale lagu sii dhawaaqay taariikhda la ciyaari doono maalinta la ciyaari doono finalka iyo kaalinta saddexaad ee UEFA Nations League.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa xog la xidhiidha xulalka qaramada soo baxay ee ku sii tartami doona UEFA Nations League iyo waliba waqtiga la samayn doono isku aadkiisa si la mid ah taariikhaha muhiimka ah ee la ciyaari doono finalka iyo kaalinta saddexaad ee tartankan.
Goormaa La Samaynayaa Isku Adka Afar Dhamaadka UEFA Nations League:
Isku aadka wareega afar dhamaadka UEFA Nations league ayaa lagu samayn doonaa magaalada Dublin maalinta isniinta ee December 3,2018 markaas oo ay afarta xul qaran ee tartankan iskugu soo hadhayaa ay ogaan doonaan cida ay wajihi doonaan.
Goormaa La Ciyaari Doonaa Kulamada Afar Dhamaadka, kaalinta saddexaad iyo waliba Finalka UEFA Nations League?:
Kulamada dhamaadka UEFA Nations League waxaa la ciyaari doonaa bisha June 2019 horaanteeda markaas oo ah xili ay soo dhamaan doonaan horyaalada Yurub waxaana kulamada afar dhamaadka UEFA Nations League la ciyaari doonaa June 5,2019 iyo June 6,2019.
Kulanka kaalinta saddexaad loo tartamayo iyo waliba kulanka kama danbaysta finalka ee UEFA Nations League ayaa isku maalin la ciyaari doonaa waxaana la shaaciyay in la qaban doono maalinta June 9,2019.
Xulalkee Iskugu Soo Hadhay Afar Dhamaadka UEFA Nations League?
Xulalka qaramada Engalnd, Portugal iyo Switzerland ayaa haddaba booskooda afar dhamaadka UEFA Nations league xaqiijistay waxaana caawa la sugayaa xulka afraad ee soo bixi doona iyada oo haddaba la ogyahay in France ama Netherlands uu kaalinta hadhsan soo buuxin doono.
Xulka qaranka Germany oo Netherlands iyo France ay isku group yihiin ayaa haddaba ka hadhay UEA Nations League wuxuuna dagaalku dhex yaalaa France iyo Netherlands. Waxaa caawa wada ciyaari doona Netherlands iyo Germany iyada oo haddii Germany ay guulaystaan uu France soo bixi doono.
Laakiin haddii Netherlands ay barbaro la galaan Germany ama ay guulaystaan waxay ka mid noqon doonaan afarta xul qaran ee UEFA Nations league ku tartami doona.
Sidaa daraadeed, afarta xul qaran ee UEFA Nations League ku tartami doonaa waxay noqon karaa England, Portugal, Switzerland iyo midkii caawa soo baxa Netherlands/France.